Ogaden News Agency (ONA) – Riwaayadda Itobiya ey ku sheegtay inay iska caabinayaan Shabaabka oy xidheen xadka
Riwaayadda Itobiya ey ku sheegtay inay iska caabinayaan Shabaabka oy xidheen xadka
Bayaan ay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya ka soo saartay riwaayadda ay xukuumadda Itobiya warinayso ee ah inay xidhay xadka u dhexeeya labada dale e Somaliya iyo Itobiya ayay ku sheegtay JWXO inuu yahay been la dhoodhoobay si loogu qariyo ololeha balaadhan ee Itobiya ay ku qaaday dadweynaha rayadka ah ee Ogadenya oo isugu jira dilka, xabsiga, kufsiga iyo barakicinta. (Riix) Ujeedada ay Itobiya ugu qaaday ololahan cadaadiska ah iyo beentan aan jirin ee ah Shabaabka ayaa soo galay ayay JWXO ku sheegtay inay ku ilaalinayso nabadgalyada waxan ay ugu yeedheen maalinta qawmiyadaha Itobiya oo lagu qaban doono Jigjiga.
Laga soo bilaabo bishii Augost, Ciidanka Itobiya, Nabadsugidda iyo gacan-ku-dhiiglayaasha la socda ee lagu magacaabo Liyu-Booliis waxay cadaadis xoogan iyo xadgudub xuquuqda aadanaha ay ku hayeen dadweynaha rayadka ah. Dadweyne kor u dhaafaya Boqol Kun oo isgu jira rag iyo dumar da’walba leh ayaa lagu soo xidhay xabsiyo laga ooday xeryaha ciidanka Itobiya ay ka samaysteen Ogadenya oo gaadhaya 200. Waxay ku sheegtay JWXO bayaanka in Kufsiga, Jidh-dilka iyo Toogashada badheedhka ah uu noqday xisaab la’aan. Sidoo kale in magaalooyinka waaweyn loo diiday inay ka soo baxaan dadkii u tagay inay ka soo iibsadaan raashin ama u iibgeeyaan badeecadooda. Xarunta dadka shacabka ah lagu xasuuqo ee loo yaqaano Jeel Ogaden oo boqolaal qof oon waxba galabsan lagu jidh dilay ilaa ay nafta ay kaga baxdo ayaan ka fogayn goobta loogu talagalay in xaflada damaashaadka qawmiyadaha lagu dhigo.
Waxaa kaloo jirta in Ciidanka Wadaniga Xoreynta Ogadenya uu kordhiyay weeraradii uu ku hayay ciidamada gumaysiga oo khasaare balaadhan uu gaadhsiiyay. Sidii caadada u ahayd ciidanka Itobiya iyo daba-dhilfyada la socda, waxay ku dhaqaaqeen inay dadka shacabka ah ee reerguuraaga ah ka aargoostaan. Waxay Jabhadda Wadaniga Xoreynta Ogadenya sheegtay inaysan ku arag wax muujinaya Shabaab inay soo galeen Ogadenya oo ciidanka jabhadda ay gacanta ku hayaan gabi ahaan miyiga Ogadenya. Waxayna ku tilmaantay JWXO ujeedada Itobiya ay ka leedahay arintan inay tahay iyadoo doonaysa inay ka jeediso caalamka xaqiiqada ka jirta Ogadenya iyo xasuuqa ay ku hayso gabi ahaan qawmiyadaha kala duwan ee ku jira boqortooyada Itobiya.
20kii sanee ugu dambeysay waxay Itobiya ku maalaysay caalamka karaka ah la dagaalanka Argagixisada, sheegashada inay Shabaab soo galeen Ogadenya ama Itobiya waa un kaarkii oy doonayso inay dib u adeegsato.
Waxay JWXO ugu baaqday dhamaan shucuubta leh dareenka aadaminimo ee jecel cadaaladda inay cambaareeyaan dambiyada bahalnimada ah ee Itobiya ku hayso shacabka Somaliyeed ee Ogadenya.
Waxaa soo saaray bayaankan JWXO